Hiran State - News: HS:-Maxaa ka jira in ciidamo u dhashay beesha Habargidir ay maanta garoonka diyaaradah Mogdishu
HS:-Maxaa ka jira in ciidamo u dhashay beesha Habargidir ay maanta garoonka diyaaradah Mogdishu
HS:- Shirar maalmahan beesha Habargidir ugu socday magaalada Mogdishu laguna doonayey in lagu qaarajiyo madax ugu sareeya Hiiraan C/fitaax Hasan Afrax ayaa u muuqda kuwo isa soo taraya.
Masuulkaan maamulka Hiiraan horboodayo ayaa lagu soo waramayaa in lagu fashilmay in dhawr jeer oo hore oo uu wasiirka arimaha gudaha ugu yeeray Mogdishu inuu yimaado laguna gacan seyray. C/Fatax Hasan Afrax ayaa la doonayaa in magaalada Modishu ay beesha Habargidir ugu dilaan sidii ay horey ugu dileen Faarah Gubadley oo Hiiraan inta looga yeeray beeshu ku dishay magaalada Mogdishu kaasi oo ay dileen ciidamo uu horkacayey ganacsade Deelaaf.
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya Mogdishu ayaa sheegaya in maanta xili ay ka duulayeen magaalada Mogdishu masuulkaan iyo waftigiisa laga celiyey garoonka diyaaradaha kadib markii lagu fashilmay in jidka loo galo isaga iyo baabuurtii galbineysay iyadoona lagu joojiyey amar ka soo baxay wasaarada arimaha gudaha siiba wasiirka wasaarada si loogu helo jaanis lagu fuliyo qorshahaas ka hor inta uusan ka dhoofin Mogdishu.
Dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamamada maamulka Hiiraan la galiyey heegan ciidmadaan oo ku sugan dhulka buuraleyda ah hadii xaaladu ilaa berito faraha ka baxdo halka laga yaabo in ay arintaan qabiil isku bedesho oo dhulka la dhigo qalabka isgaarisiinta ee saaran buuraha Hiiraan oo ay leeyahiin beeshaan horey u galaafatay dad badan oo reer Hiiraan ah.
Dagaalka ay wasaarada arimaha gudaha kula jirto masuulkaan ayaa lagu soo waramayaa inuu salka u hayo qilaaf horey u soo dhax maray Xeefoow oo ka tirsan kooxda Ahalusuna iyo C/fataax Hasan Afrax kadib markii uu ugudhaartay ineysan Hiiraan ka talineyn kooxda Ahalusuna oo Hiiraan looga yaqaano koox xukun doon ah, waxaana qilaafkaas la doonaya in loog afaa'ideysto wasaarada arimaha gudaha oo uu wasiir ka yahay nin ay wada dhasheen Xeefoow.
Isku soo duuboo C/fataax Hasan Afrax waxaa lagula dagaalsan yahay maxaad Hiiraan u nabadeyneysaa inagaa ururo qas ka sameeya u soo wakiilan jirnay sida Xizbul Islaam iyo wax la mid ah.
Xiriiro kala duwan aanu la sameynay Mogdishu iyo Hiiraan ayaa waxaa jira guuxa arintaan ku saabsan hadaba wararkii oo dhameystiran filo goor dhaw iyo siyaasiyiinta arintaan ku lug leh si aad u noqoto xog ogaal iyo taariikh nololeedka wasiirka arimaha gudaha xiligii uu ku noolaa dalka Canada iyo howlaha uu maanta faraha kula jiro ee qabiilka mutaxan ah.
Wasiirka arimaha gudaha oo ah shaqsi iskiis u dhiban laguna xanto inuu qabo cudurka HIV-ka inkasta oo aan arintaas jiritaankeeda walito si rasmi ah loo hubin ayaa ku biiray siyaasadahii guracnaa ee uu madaxweyne Shariif kula dhaqmi jiray bulshada Hiiraan,waxeyna aad ugu soo horjeedaan isaga iyo Shariifka in wafti ka socda Hiiraan uu gaaro Jabouti maadaama ay horey Shariifka iyo xulufadiisa magaca Hiiraan shirarka dibadaha ugu qeyb gali jireen dad ay iyagu dirsadaan ee reerkiisa ah oo ay beesha caalamka horey ugu sheegeen iney Hiiraan siiyeen malaayiin dolar sanadahii ugu danbeeyey taasi oo dhawaan beenoobi doonto.
Warar leysku haleyn karo ayaa sheegayo in hada lagu dhagan yahay masuuliyiintii maanta waftiga ka celiyey garoonka diyaaradaha waftigaas oo ka kala socday Hiiraan,Bay iyo Bakool. wasiirka arimaha gudaha waxuu wasiir ka yahay magac ahaan waa wasiirka aan xitaa degaanka uu ka soo jeedo ee Galgaduud maamul dowlada taageersan u sameyn karin laakinse waxaa u sahlan dad degaankooda u tashanayo oo nidaam iyo kala danbeyn doonaya inuu carqaladeeyo.
La soco wararkeena danbe iyo taariikhda wasiirka arimaha gudaha ee xilkaan ku helay ururka xukun doonka ah ee Ahalusuna waljameeca walow kooxdii uu xilkaan ku helay ay bur burtay.
· admin on June 12 2012 15:15:29 · 0 Comments · 2264 Reads ·
14,666,477 unique visits